DHAGEYSO:Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Wajeer oo ku baaqay in amniga ismaamulkaasi la xoojiyo | Star FM
Home Wararka Kenya DHAGEYSO:Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Wajeer oo ku baaqay in amniga ismaamulkaasi...
DHAGEYSO:Qaar ka mid ah siyaasiyiinta Wajeer oo ku baaqay in amniga ismaamulkaasi la xoojiyo
Siyaasiyiinta ismaamulka Wajeer oo ay ka mid yihiin xildhibaanka deegaanka Ceeldaas Aadan Keynaan Weheliye iyo xoghayaha maamulka sare ee wasaaradda deegaanka Maxamad Ibraahim Cilmi ayaa ku baaqay in la xoojiyo amniga dowlad deegaankaas.
Waxay shacabka ugu baaqeen in ay midnimada ku dadalaan oo ay deganaansho muujiyaan iyada oo ay jiraan arrimo siyaasadeed.
Mas’uuliyiintan ayaa sheegay in dowladda laga doonayo in ay ka hor tagto isku dhac dadweyne.
Xildhibaankii hore ee deegaanka Tarbaj Maxamad Ibraahim Cilmi oo saacado ka hor warbaahinta la hadlay ayaa yidhi
Tani ayaa timid ka dib markii barasaabkii xilka laga qaaday Maxamad Cabdi Maxamuud uu galinkii dambe ee shalay sheegay in xilka si sharci darro ah looga xayuubiyay oo ayna maxkamadda Meru u oggolaatay inuu shaqadiisa sii wato.
Maxamad Cabdi ayaa intaa ku daray inuu dhawaan tagi doono Wajeer maadaama uu aaminsan yahay inuu weli yahay barasaabka ku shaqeynaya sida waafaqsan xeerarka dalka.
Hasa ahaate waxaa uu cadeeyay inuusan jirin wax khilaaf ama cadowtinimo oo kala dhexeyay ku xigeenkiisi iyo wakiillada golaha hoose ee Wajeer ee xilka ka qaaday ka hor inta aqalka sare ee Kenya uunan ku taageerin.
Maxamad Cabdi Maxamuud oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa waxaa hadaladiisa ka mid ahaa
Guddoomiyaha Wajeer Axmad Cali Mukhtaar oo horay ku xigeen u ahaa Maxamad Cabdi maalmo ka horna loo dhaariyay jagada barasaabka ismaamulkaasi ayaa dhankiisa sheegay inuu shacabka u adeegaya ilaa iyo inta amar dambe uu ka soo baxaya.
Waxaa uu xusay in ay tixgelin doonaan go’aanka ka soo baxo guddi la doonayo in madaxa cadaaladda ee dalka Martha Koome ay u xilsaarto dhageysiga cabashada barasaabkii hore.
Barasaabka ayaa sheegay in ay jireen caqabado dhanka caafimaadka ah oo la xalliyay sidoo kalena ay ku dadaalayaan in ay qandaraasleyda siiyaan lacagaha ka maqan .
Next articleFred Matiang’i oo toddobadkan hor tagaya guddiga aqalka sare ee amniga